Su'aalaha la Weydiiyo - Soo-saaraha TC
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soosaar ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib marka la helo bixinta debaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan markii (1) aan helnay deebaajigaagii, iyo (2) aan helno ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
30% ayaa hormaris ah, 70% dheelitirka dhanka ah nuqulka B / L.
Ma dammaanad qaadeysaa inaad alaab ammaan ah oo ammaan ah gaarsiisid?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa kaydinta khatarta khaaska ah alaabada khatarta ah iyo maraakiibta keydka qaboojiyaha oo ansax ah alaabada xasaasiga ah. Baakadaha khaaska ah iyo shuruudaha xirxirka aan caadiga ahayn waxay ku imaan karaan lacag dheeraad ah.
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express Express sida caadiga ah waa tan ugu dhakhsaha badan laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Xeerarka badda waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.